कसरी घर मा "VKontakte" ब्लक गर्न
के तपाईं कहिल्यै "VKontakte" कसरी ब्लक गर्न को प्रश्न विचार गर्नुभएको छ? आखिर, म निश्चित छु हामी प्रत्येक ढिलो होस् वा पछि आफ्नो जीवन लागि अर्थपूर्ण कुरा सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ कि एक सय प्रतिशत। उदाहरणका लागि, धेरै मान्छे, आफ्नो पुस्तक लेख्न आफ्नो अनलाइन स्रोत र यति मा सिर्जना गर्न, केही खेल गर्न धेरै उत्सुक हुन्छन्।
तर अवस्थामा को नब्बे-नौ प्रतिशत, यी विचार वास्तविकता अनुवाद छैन। यो कारण - आलस्य र disorganization।
र सामाजिक सञ्जाल मात्र योगदान। समग्र औसत व्यक्ति बर्बाद बल्छ कति समय कल्पना गर्न डरलाग्दा।
यहाँ कसरी प्रश्न पृष्ठ ब्लक "VKontakte" धेरै उपयोगी हुनेछ। अब म काम को एक विधि भन्नेछु।
त्यहाँ एक अद्भुत उपकरण, भनिन्छ जो «BlockItFor.Me» छ। यो तपाईं एजेन्डा कसरी ब्लक गर्न को प्रश्न हटाउन मद्दत गर्छ "सम्पर्क मा"। यो मात्र माइक्रोसफ्ट प्रणाली मा काम गर्दछ उल्लेख गर्नुपर्छ, त्यसैले तपाईं एक लिनक्स वा म्याक छ भने, यो अवस्था बाहिर अर्को बाटो खोज्न। यो सफ्टवेयर मात्र होइन सामाजिक सञ्जाल, तर पनि धेरै अन्य साइटहरु unceremoniously आफ्नो समय चोरी छन् अवरुद्ध सक्षम छ। तर यो लेखमा कसरी ब्लक गर्न बारेमा छ देखि "VKontakte" हामी अन्य साइटमा बास छैन।
उपयोगिता को मुख्य लाभ यो स्थापना गर्न आवश्यक छैन भन्ने छ। एक आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न मात्र आवश्यक छ। जब तपाईं यसलाई खोल्न, एक विन्डो जहाँ तपाईंले साइन "रोक्नुहोस्" र एउटा बटन देख्ने तपाईं को सामने, मा प्रदर्शित हुनेछ। यो पूर्वनिर्धारित सेटिङ लक धेरै साइटहरु परिभाषित गरिएको छ, किनभने आवश्यक छैन तुरुन्त थिच्नुहोस्। बटन विकल्प शीर्ष दायाँ कुनामा क्लिक गरेर सेटिङ जानुहोस्। साइटहरु सूची हेर्न, र त तपाईं अलविदा भन्न आवश्यक छ कि ती जाँच गर्नुहोस्।
यो "VKontakte" कसरी ब्लक गर्न को प्रश्नको जवाफ छ। तपाईं सबै सेटिङ लागू गर्दा, सामाजिक सञ्जाल पहुँच, तपाईं गुमाउनु हुनेछ। जब तपाईं यो साइट जाने प्रयास आफ्नो ब्राउजर तपाईं सबै साना सामान आफ्नो बहुमूल्य समय बर्बाद छैन भनेर बताउँदै एक सन्देश जारी हुनेछ। साथै, तपाईंले कुन किनभने यो बचत गर्न सक्षम छ समय तथ्याङ्क दिइनेछ।
शायद, तपाईंले तुरुन्तै उपयोगिता गरिरहेको छ कसरी एउटा प्रश्न, किनभने तपाईं र बन्द गर्न सक्नुहुन्छ नै सफलता संग छ। तर सबै त सरल छैन। विकासकर्ता पटक देख्छन् मान्छे पहुँच प्राप्त गर्न प्रयास, खडा गर्न सक्छ जब छैन। तसर्थ, अनलक सफ्टवेयरको संयन्त्र प्रदान गरिएको छैन। थप ठीक, यो कदापी अवस्थित, तर महसुस यो यति सजिलो छैन, छ। तपाईं यसलाई के गर्न भनिन्छ «UnBlockItFor.me» अर्को उपयोगिता पाउन सक्छ।
एक पाँच-गुना क्याप्चा को परिचय - जब तपाईं यसलाई सुरु, तपाईं प्रतीक्षा, "रोचक" र "रोमाञ्चक" प्रक्रिया हुनेछ। एक पटक तपाईं यसलाई मास्टर, तपाईं अनलक गर्न कोड प्राप्त गर्नेछ। विकासकर्ता आफ्नो व्यवहार को धेरै प्रदान गरेको छ। यो उपयोगिता तपाईं आधिकारिक वेबसाइटमा आफ्नो कम्प्युटरबाट पहुँच ब्लक गर्न अनुमति दिन्छ। यस मामला मा, "विषको असर रोक्ने औषघि" प्राप्त गर्न, तपाईं यसलाई आफ्नो साथीहरूबाट खोज्न छ। सबै छ। अब तपाईं "VKontakte" कसरी रोक्न थाहा छ। मलाई आशा छ अब आफ्नो सबै सपना एक वास्तविकता बन्न सक्नुहुन्छ।
भिडियो कसरी Skype रेकर्ड गर्न? स्काइप लागि उपयोगी सफ्टवेयर निःशुल्क भिडियो कल रिकर्डर
अधिनियम - यो ... मूल सञ्चालन सफ्टवेयर हो। प्रणाली सफ्टवेयर द्वारा समावेश
कागजात-DjVu कसरी छाप्न
भित्री डिजाइन लागि कार्यक्रम के हुन्
Transcranial मस्तिष्क बच्चाहरु: समीक्षा। transcranial प्रत्यक्ष वर्तमान उत्तेजना को विधि
एक हप्ता "माइनस5किलो" को लागि आहार: स्लिमिङ समीक्षा
जोडाको कुन चिन्ह उपयुक्त छ जुन।
वायरलेस सञ्जालको प्रविधिहरू। वाह्याम के हो?
सीजेरियन वितरण पछि sutures: के?
मुद्रण सेवा अनुसार। ग्राहकहरूको लागि प्रतिद्वन्द्वी लडाई।
प्लम विद्युत driers कसरी सुक्खामा? प्लम को बार - व्यञ्जनहरु